Pseodepigrafa (literatiora) - Wikipedia
Ny pseodepigrafa dia lahatsoratra izay lazaina fa nosoratan'ny olona iray voatonona anarana nefa tsy nanoratra azy akory. Avy amin'ny teny grika hoe ψευδής / pseudḗs, "sandoka", sy hoe ἐπιγραφή / epigraphḗ, "soratra voasokitra" na "anarana" ny teny nogasinan hoe pseodepigrafa.
Amin'ny ankapobeny dia olona malaza ao amin'ny tantara no lazaina fa nanoratra ny asasoratra pseodepigrafa, ka fahita izany na teo amin'ny lahatsoratra ivelan'ny fivavahana na teo amin'ny literatioram-pivavahana toy ny boky maro ao amin'ny Baiboly.
Nandritra ny Andro Taloha dia izany ny fanaon'ny mpanoratra maro izay tsy tena fantatra ny antony. Tamin'ny vanimpotoana nielezan'ny kolontsaina grika, teo amin'ny tontolon'ny fivavahan'ny jiosy sy kristiana, dia maro ny lahatsoratra lazaina fa nosoratan'i Henôka (na Enôka), i Noa (na Nôe), i Mosesy (na Môizy), i Sôlômôna (na Salômôna), i Baroka, sns.
Maro ireo mpivarotra ratsy saina izay nivarotra boky nosoratany na nangoniny izay lazainy fa nosoratan'ny olona malaza sahala amin'i Aristôty na i Platôna.
Maro ireo boky ao amin'ny Testamenta Vaovaon'ny Kristiana izay heverin'ny mpikaroka ra-tantara fa pseodepigrafa, ka isan'izany ireo epistily nosoratan'i Paoly, ny Evanjely araka an'i Matio ary ny Evanjely araka an'i Joany.
Pseodepigrafan'ny Testamenta Taloha
Pseodepigrafan'ny Testamenta Vaovao
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseodepigrafa_(literatiora)&oldid=994997"
Voaova farany tamin'ny 25 Jolay 2020 amin'ny 10:45 ity pejy ity.